Soosaarayaasha Sunta Tahay Barafka | Shiinaha Ice Cube saareyaasha & Factory
Dambiisha tuubbada tuubada ee loo isticmaali karo Dambiisha silikoon ee la kariyey, Talooyinka Bacaha Dheeriga ah, Xaasaska Boorsooyinka Lamaanaha iyo Xirmooyinka Dambiisha Frosting - Cupcakes Kukiyada Dubida Alaabada Qurxinta
Ammaan & Caafimaad: xirmada sahayda qurxinta keegga ayaa ah alaab ku jirta darajada cuntada, Ha ka welwelin caafimaadka adiga iyo qoyskaaga! Kufiican bilowga, rootida ama keega qurxinta jacaylka. Dambiisha Dib loo Isticmaali Karo Bacaha ciida ee dib loo isticmaali karo ayaa baabiin kara baahida loo qabo in si isdaba joog ah loo iibsado duub caag ah oo qaali ah, Ilaalinta Deegaanka. Ujeedooyin badan & Fudud oo Cle ...
Ahama subagga ahama ee jiiska silig goynta Slicers Midiyaha Jikada
• Waxyaabaha: ahama birta aan xarka lahayn ， raagaya oo aan sahlaneyn in la daxalo oo la dillaaco. Waxay sidoo kale kaa caawin kartaa inaad kula raaxaysatid farmaajada fiican qoyskaaga ama martidaada Si fudud oo loo nadiifiyo loona kaydiyo: Cajiilahayaga farmaajo malaha shaqo xabag leh, sidaa darteed si fudud ayaa loogu dhaqi karaa biyo ama lagu masixi karaa maro, ka dibna la qalajin karaa oo lagu ridi karaa khaanad adiga oo aan kuu qaadan boos badan • Kufiican farmaajo, keega, ukunta iyo wixii la mid ah.
Qaab-dhismeedka Wadnaha Qaab-dhismeedka silikoon Qaab shukulaatada wasakhahaasi Cagaar shukulaato wasakhdo u samaysa Silikoon-samaynta Qaabka Valentine's
Qaababka wax u dubida qaabka wadnaha: wasakhdaas silikoonka ah waxaa loogu talagalay qaababka wadnaha oo ka kooban 10 qalbi oo yaryar, waxayna ku jiraan casaan, aad ugu habboon in loo isticmaalo Maalinta Jacaylka si loogu kariyo cunnada qoyskaaga, jacayl tayo sare leh: qaababka wadnaha ee qaabeynta dubista silikoon waxay ka samaysan yihiin wasakhyo tayo sare leh, jilicsan laakiin adag, iyo buskudka la dhammeeyay, shukulaatada gudaha ku jirta si fudud ayaa looga saari karaa iyadoon waxyeello u geysan qaabkooda; leh caabbinta heerkulka sare, waxay ku badbaadaan gelinta qaboojiyaha, o ...
Ice Cube Tray Tirada Weyn ee Silikoni Farsamaynta 15 Caag Baraf Sameeya ee Whiskey iyo Cocktails, Cabitaanada Ka Dhig Qabow
Ugu Fudud Ee Loo Adeegsado - Kaliya buuxi biyo, soodhaha, geedaha, miraha ama casiirka, iwm oo kaliya geli qaboojiyaha, waxaad lahaan doontaa baraf baraf ah. Kuubbo badan oo Ice ah - Waxay sameyn kartaa 5 × 3 laba jibbaaran oo isku mar ah. Ku raaxayso cabitaano badan. Waa in Loogu Baahanyahay Baarkaaga iyo Jikada - The Big Ices waa kuwo ku habboon in lagu qaboojiyo is biirsaday, whiskey, tequila, vodka ama cabitaanno kale oo lagu badhxo yar. Iyo adeegsiyo badan oo loogu talagalay guryaha kale, maraq, ama barafka ubaxa. Ammaan u Leh Isticmaalka - Isticmaal qaboojiye silikoon heer sare ah oo cunno leh, microwave ...
Caaryado Silikoon Emoji ah oo loogu talagalay Kaaraloollada Shukulaatada Ice Cube Jelly Truffles Pralines Ganache
XAQIIQDA LOOGU TALAGALAY MOOD KASTA: Xarafka 32 astaamaha emoji emoji oo ku baahsan 2 baakidh. U soo qaado dareen kasta xafladda dhalashada ilmahaaga. TAYO: KHARASHYADA LAGU BADBAADIYAY, adiga oo macaamiisha maskaxda ku haya. 100% SURE SGS iyo LFGB waa la ansixiyay, BPA silikoon bilaash ah. KHUDBADAHA AAN KU DHAGAN KU DHAMMAAN faahfaahin faahfaahsan oo tayo sare leh iyo ka-qaadista waxyaabaha ku jira si fudud. JAWAAB iyo DURABLE. Wasakh u adkaysata oo si fudud loo nadiifiyo. SAFE u isticmaal mashiinka weelka lagu dhaqo, foornada, microwave iyo qaboojiyaha. ECO-FRIENDLY: waxay u adkeysan kartaa heerkulka u dhexeeya f ...
Qalitaanka silikoon wadnaha qaabeeya silikoon wadnaha qaabeeya barafka cube ee jaceylka, xaflada, shukulaatada arooska, keega, jelly, sameynta qubbad wadnaha
Qalab lagu kalsoonaan karo: silsiladahan qurxoon ee caaryada qalbiga ah waxaa badanaa laga sameeyaa silikoon la isku halleyn karo, farsamo wacan, muuqaal fudud oo deeqsinimo leh, midab isu eg, nadiif ah oo dabacsan, adkeysi leh, khadad nadiif ah, dusha sare oo sahlan, nadiifinta iyo shaqeynta, fududahay in la dumiyo lana kaydiyo Qiyaasta saxda ah: qalabkan caaryada wax lagu dubo ee wadnaha u qaabeysan waxay dib u cabbirayaan cabirkii ku habboonaa inta badan microwaves, foornooyinka iyo weelka weelka lagu dhaqo, miisaan fudud oo la qaadi karo si loo qaado naqshadda mowduucyada Fasaxa leh: caaryada silikoon ee wadnaha u eg ee lagu sameeyay saafi ...
Ice Cube Trays, Large Square Silicone Ice Maker Qaab, Ku Fiican Whiskey, Cocktail, Maraq, Cunnada Ilmaha, Daaweynta la Qaboojiyey, Stackable, BPA Free
QAABKA TAYO SALOONKA UGU SARE EE SAMEEYA QAADAYAASHA - barafka barafka leh ee daboolka leh ayaa loo adeegsaday dusha sare ee silikoon heerka cuntada aaminka ah. Waxaan u dooranayna sheykan silikoonka ah maxaa yeelay waxay ka dhigeysaa saxaaradu mid aan laga soo horjeedikarin waxyeelo ama dildilaac inta lagu ridayo qaboojiyaha. SII FUDUD - Dabacsanaanta silikoon jilicsan iyo naqshadeynta dusha sare ee saafiga ah ayaa u oggolaanaysa xabadaha barafoobay inay si fudud u soo baxaan. Si fudud u soo jiido labada dhinac ee saxaaradda oo hoosta ka riix, cube jumbo ayaa isla markiiba banaanka u soo baxaya. Surfa-aan-ul ...